Farmaajo oo iska horkeenay Maamul Goboleedyada Soomaaliya | Keydmedia
Farmaajo oo iska horkeenay Maamul Goboleedyada Soomaaliya
Waxuu sheegay in hada ka hor Puntland iyo Jubbaland ay cod ka duubeen, isagoona uga digay in Madaxweyne Waare ay sidii oo kale ku dhacdo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa khilaaf ka dhex abuuray Maamul Goboleedyada dalka, si uu u weeciya deraanka bulshada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka dib u dhaca ku yimid iyo tooshka isaga ku ifsan.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre, ayaa weerar afka ah ku qaday maamulada Jubaland iyo Puntland oo uu sheegay in ay markasto ka hor yimaadaan shirarka iyo wada-tashiga ay dowlladda ugu baaqdo.
Guddoomiye Barre oo ka hadlayay munaasabad xalay ka dhacday Muqdisho ayaa ugu baaqay in Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare in uusan ku dayan maamulada Puntland iyo Jubbaland islamarkaana uu kasoo qeyb galo shirka Madaxweyne Farmaajo iclaamiyay, oo la filayo in uu dhaco 5-8 bishan.
“Madaxweyne waare waxaan kula talin lahaa in uu shirka uu iclaamiyay Madaxweyne Farmaajo uu ka qeyb-gallo,: ayuu yiri Guddoomiye Cusmaan Barre.
Sidoo kale, Guddoomiye Barre ayaa sheegay in Dastuurka dalka uu qorayo in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kawada wada-tashadaan Arrimaha masiiriga ah ee dalka, balse hada taasi ay diidanyihiin dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland.
Farmaajo ayaa 250kii Bishii la soo dhaafay ku casuumay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir in ay kasoo qeyb-galaan shirka golaha amniga Qaranka, kaasoo wadatashiyo ballaaran looga yeelanayo arrimaha doorashooyinka, amniga, dagaalka ka dhanka ah dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab , dhammeystirka Dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka.
Hase yeeshee, waxaa arintaas ka biya diiday golaha Wakiilada Puntland oo dhawaan ka soo horjeestay matelaadda xubnaha Aqalka Sare ee gobolka Banaadir iyo xeerka doorashooyinka dalka, iyagoo Madaxweynaha Puntland usoo jeediyey inuu ka baaqsado Shirkii Muqdisho.